Mombamomba ny orinasa | ANHUI TANGRUI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD
Company: ANHUI TANGRUI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD
Adiresy fisoratana anarana: 116 # Fangzheng Road, Jiujiang Faritra fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia, Wuhu Tanàna, Anhui
Mpiasa: 150(Teknika sy kalitao Dep.30,Production Dep.100 )
Daty nananganana: 2016
Toerana fananganana: 40000㎡(Tfaritra famokarana otal amin'ny tobim-pamokarana county Wuhu sy ny toby famokarana Wuhu City)
Asa lehibe: Sombiny fiara (Ho an'ny fiara iraisana, averinafiara, fiara calssic,faritra misy fiara manohana ny seranam-piaramanidina,
toy ny familiana, ny sandry mifehy, kodiarana kodiarana, sns.)
Tombam-bidy 2017: Zato tapitrisa mahery
ANHUI TANGRUI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD (foibe) dia natsangana tamin'ny taona 2016, hita ao amin'ny 116 #
Làlana Fangzheng, faritra fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia Wuhu, Anhui, miaraka amina fitaterana mety.
Mampifandray ny R&D, ny famokarana sy ny varotra, miaraka amin'ny haitao sy fitaovana mandroso, fitantanana henjana, teknolojia mandroso ary fanaraha-maso kalitao henjana. Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana knuckles mamily. Ankehitriny dia misy karazana knuckles familiana mihoatra ny 800, ao anatin'izany ny kilasy ambony, midium ary minicars. Ny fizarazaran'ny varotra dia mizara ho OEM sy fivarotana (anatiny sy ivelany)
Ary ny faritra roa amin'ny tsena eto an-toerana sy any ivelany, dia manome knuckles familiana ho an'ny CTCS, Chery, BYD, Geely ary BAIC.
Namidy tany Eropa, Amerika, Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient ary faritra hafa. Manana tambajotra varotra anatiny be dia be izahay, manarona faritra sy tanàna mandroso.
Ireo toby fanamboarana roa an'ny orinasa dia mandrakotra velarantany 40000 metatra toradroa, miaraka amin'ny atrikasa 5: fanariana nodular, machining 2 CNC, fitsaboana amin'ny endriny ary fampandrosoana ny bobongolo. Misy andiam-pitsaboana fasika amin'ny atrikasa fanariana. Ny fahaizan'ny fitsaboana vy isam-bolana dia 800 taonina, ary ny fahaiza-manao amin'ny atrikasa fanodinana dia 200,000 pcs / volana. Ny atrikasa fitsaboana an-tany dia manana tsipika E-coating feno mandeha ho azy. Atrikasa fampandrosoana mold dia manana vondrona mpamorona lasitra matihanina, mpamorona endrika.
Ny filôzôfian'ny orinasako dia ny "Career is well in specialised, ary ny fahombiazana dia azo amin'ny alàlan'ny fisainana". Izahay dia nanolo-tena tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny familiana knuckle, mandray ny teknolojia ho ny fotony.
Fanavaozana mitohy, ary ezahina hatsaraina ny kalitaon'ny vokatra no andraikitsika. Ny orinasa dia voamarin'ny ISO9000 tamin'ny 2007, ary nahatratra sy nampihatra ny fitantanana kalitao TS16949 tamin'ny 2017.
Ny vokatra avy amin'ny orinasa dia araha-maso amin'ny fizotran'ny fanariana sy ny milina arakaraka ny fenitra momba ny rafitra fitantanana kalitao ISO / TS16949.
Tongasoa eto amin'ny fifandraisana sy fiaraha-miasa aminay.
Hood Shock Absorber, Tyre Ball Joint, Hub misy kodiarana, Shock Absorber Bolt, Shock Absorber fingotra, Knuckle familiana eo aloha,